RANOMPOANA → Mpanondraka rano • mpisotro • kosmetika • Elkay Polska
Matsiro - mora vidy
rano ao an-trano sy ao amin'ny birao
Ny olona dia nifandray foana ranony fiainana mifantoka manodidina ny loharano, nipoitra ny olombelona amin'ny lafiny rehetra amin'ny fiainana. Androany ny fitsapana famokarana rano sy fanaparitahana miaraka amina fitaovana sarotra sy teknikan'ny teknolojia izy ireo.
Ny orinasantsika, Ranon-drano niasa teo an-tsena nanomboka tamin'ny 2004.
Izahay ihany no mizara mpitondra eran'izao tontolo izao amin'ny indostria any Polonina.
Izahay dia mivarotra vokatra orinasa: Acuva - Jiro LED UV, Cosmetal - ny fandefasana rano, Elkay - mpisotro sy loharano, Metalco - trano maritrano kely, Valeran'ny mpihira - mpitarika amin'ny sehatry ny fanaraha-maso ny tontolo iainana, fandrefesana (oh: ny onja, ny tsindry), ny firaketana ny angon-drakitra ary ny fifehezana ny tambajotram-pamatsian-drano (oh: fihenana valves).
Manasa anao koa izahay mba hahafantatra ny tenanao amin'ireo marika hafa: CityFormDesign.pl ary ImagiLights.pl
orinasa Acuva dia naorina tamin'ny 2014. Ny tanjony dia ny famahana ny olana misy ankehitriny, ny fandresena ireo sakana ary ny fiatrehana ireo fanamby vaovao tsy tapaka amin'ny fanomezana rano fisotro azo antoka. Manam-pahaizana manokana amin'ny rafitra famonoana rano amin'ny faran'ny fampiasana azy, ary koa amin'ny fampiharana OEM modular. Amin'izao fotoana izao, ny rafitra Acuva rehetra dia voasedra sy ampiharina saika amin'ny kaontinanta rehetra manerantany.
Acuva Technologies Inc. dia mpitarika eran-tany amin'ny haitao Famonoana rano UV-LED. Izy ireo dia mamolavola, mamolavola ary manamboatra rafitra UV-LED mandroso mba hamonoana rano maoderina sy mahomby. Ny tanjon'ny orinasa dia ny hanomezana rano fisotro madio sy madio ho an'ny olona manerantany, ka hiantohana fiainana avo lenta ho azy ireo.
Cosmetal dia niorina tamin'ny 1951 ho toy ny atrikasa fianakaviana kely ho an'ny fanamboarana metaly sy fanaovana singa ho an'ny indostrian'ny elektronika.
Amin'ny taona manaraka, ny famokarana dia nohanin'ny vokatra vata fampangatsiahana ary amin'ny fototr'izy ireo dia manomboka ny famokarana ny fandefasana rano.
Amin'izao fotoana izao dia mpanamboatra fitaovana betsaka amin'ity karazana ity izy io, miaraka amin'ny vahaolana avo lenta, vahaolana ara-teknika sy teknolojia maoderina ary famolavolana maoderina, vita amin'ny fitaovana tena tsara indrindra, manome antoka ireo mpanjifa mandritra ny taona maro.
Ny vokatra kosmetika dia amidy any amin'ny firenena maro manerantany ary ankasitrahana noho ny kalitaony.
orinasa Elkay dia niorina tamin'ny taona 1920 tany amin'ny faritra avaratr'i Chicago ho atrikasa kely.
Hatramin'izay dia miasa tsy an-kijanona izy famokarana mpisotro ary spasy ranoNandritra ny taona maro izay, nanaporofo ny fikarakarantsika ny kalitao sy ny fenitra avo indrindra.
Izany dia izao ny mpitondra an'izao tsena izao, manitatra tsy tapaka ny tolotra omeny ho an'ireo mpandray azy, manitatra hatrany amin'ny modely ahitàna ireo vahaolana ara-teknika farany farany, toy ny: serivisy tsy mifandray, ny counter Tricker Green, sns.
Metalco manana ny endrika izy ary manohy maneho ny fomba famoronana izay nanomboka tamin'ny nananganana azy voalohany tamin'ny 1984.
Metalco dia midika hoe Stylesatria ny karazan'entana amin'ny vokatra rehetra sy ny tsipiriany rehetra dia mampiavaka ny Metalco amin'ny tantarany momba ny endriny, amin'ny teknolojia vaovao farany. Ny Metalco dia fitambaran-doko ahitra izay mikendry vahaolana amin'ny ekolojika.
Ny fahombiazan'ny varotra an'i Metalco dia vokatry ny fikarohana sy fanandramana maharitra amin'ny famolavolana, koa misaotra amin'ny fandraisana anjaran'ny arisialy malaza sy ny mpamorona ny anarana malaza iraisam-pirenena, ny fitaovana manta ary ny teknolojia farany farany.
Valeran'ny mpihira endrika sy fanamboarana mandeha ho azy mifehy valva ho an'ny indostrian'ny rano eran-tany.
Nanomboka tamin'ny 1957, ny mpanamory fiaramanidina fitaterana diaphragm dia natsangana teo amin'ny kaontinanta manerana an'izao tontolo izao.
Na fitantanana rano very any Azia Atsimoatsinanana, olana momba ny fiarovana ny rano any Arabia Saodita, na filàna fizarana monisipaly amerikana, dia manome vahaolana fitantanana ny rano ho an'ny governemanta, tanàna, orin'asa ary mpandraharaha manerana an'izao tontolo izao isika. .
Ny ankamaroan'ny vokarintsika vaovao dia teraka noho ny faniriana voajanahary hamahana ny olana fampiharana.
Ny olana natolotra, ny ekipanay manam-pahaizana momba ny elektronika, ny fitaovam-piadiana ary ny fantsom-pamokarana dia tsy miato amin'ny fikarohana na ny endriny mandra-pahitana vahaolana.
Jereo ny sary mihetsika Singer >>
Ireo mpamaky rano manondrana dia miha-hita matetika amin'ny orinasa, birao ary eny amin'ny trano tsy miankina. Fitaovana maoderina hamoahana rano ...
Manolotra tavo-drano fisotroana rano fisotroana ho an'ny fanabeazana izahay, ho an'ny indostrian'ny HoReCa, fikarakarana ara-pahasalamana, trano, birao, tranom-panjakana, valan-javaboary, trano…
Ny fihenan'ny tsindry amin'ny rano, ny fitsipiky ny sivana sy ny famoahana tsindry. Ny fiovan'ny tsindry ao anaty rano dia matetika no vokatry ny hafa, ...
Jereo vaovao bebe kokoa